Ikhaya » izithuba » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-China-iTajikistan yoKhenketho: Abongameli bavumile ukuphucula intsebenziswano
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeChina zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zokuhamba eTajikistan • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
I-China-iTajikistan yoKhenketho: Abongameli bavumile ukuphucula intsebenziswano
Ezokhenketho bezikwi-ajenda, xa uMongameli waseTajikistan u-Emomali Rahmon kunye noMongameli wase-China u-Xi Jinping babambe iingxoxo ngoMgqibelo, bevuma ukuqinisa nzulu ubambiswano olunobuchule kula mazwe mabini kuphuhliso oluqhelekileyo kunye nokuchuma.
Uye wathembisa ukuzimisela kwe China ukunceda iTajikistan iphucule imeko yezolimo, ithathe inxaxheba ekwakheni iTajikistan kwimimandla yezoqoqosho yasimahla, kwaye ibe notshintshiselwano ngakumbi kwinkcubeko, kwezemfundo nakwezokhenketho.
Abongameli babini bancomile ubudlelwane be-China-Tajikistan kunye nentsebenziswano kumacandelo ahlukeneyo, kwaye ngokudibeneyo bacacisa iplani entsha yokuphuhlisa ubudlelwane bamazwe amabini.
Bavumile ukuzibophelela kumazwe abo ekuphuhliseni ubuhlobo kwimozulu yonke, kunye nokukhuthaza ukwakhiwa koluntu kunye nekamva ekwabelwana ngalo ngoluntu.
U-Xi uvuyisene neTajikistan ngokusindleka ngempumelelo ingqungquthela yesihlanu yeNkomfa yokuNxibelelana kunye neMilinganiselo yoKwakha e-Asia (i-CICA), esithi isivumelwano kunye neziphumo ezifunyenwe kulo msitho zithumela imiyalezo elungileyo kwaye zifake amandla kwilizwe liphela.
Uye wathembisa ngokuqhubeka nenkxaso esuka e-China isiya e-Tajikistan, ephethe ubumongameli be-CICA ngoku, ukuqhubela phambili ukuphakamisa inqanaba lentsebenziswano ye-CICA.
Ubudlelwane base China-Tajikistan bugcinile ukukhula okuphucukileyo okoko la mazwe mabini aseka ubudlelwane bezopolitiko kwiminyaka engama-27 eyadlulayo, u-Xi utshilo, eqonda ukuba bangabamelwane abalungileyo, abahlobo kunye namaqabane kunye nobudlelwane bamazwe amabini abona abalaseleyo embalini.
I-China iyavuya ukubona iTajikistan ezinzileyo, ephuhlayo nenenkqubela phambili, kwaye ixhasa ngokuqinileyo ilizwe ekulandeleni indlela yophuhliso evumelana neemeko zelizwe labo, kwaye ixhasa iinzame zayo ekukhuseleni ulawulo lwelizwe kunye nokhuseleko, utshilo u-Xi.
I-China izimisele ukuqinisa uyilo olukumgangatho ophezulu wobudlelwane phakathi kwamazwe amabini necala laseTajik, ukuphucula inqanaba lentsebenziswano kumacandelo ahlukeneyo, kunye ngokudibeneyo nokwakha uluntu lwase China-Tajikistan nophuhliso loluntu, utshilo.
U-Xi ubongoze la macala mabini ukuba aqhubeke nokuxhasana ngokungagungqiyo kwimiba ephathelene neminqweno yabo. Uthe iTajikistan ihlala ixhasa kwaye ithathe inxaxheba ekwakheni ngokudibeneyo kweBelt kunye neNdlela, kwaye ukusebenzisana kwala mazwe mabini kwesi sikhokelo kunesiqhamo.
Ucele la macala mabini ukuba aqhubeke nokusebenzisana kwi-Belt kunye neNdlela yokuQala kunye neqhinga lokuphucula ilizwe laseTajikistan, betha amandla kwaye baphakamise umgangatho wentsebenziswano, kwaye bandise intsebenziswano yabo kunxibelelwano, amandla, ezolimo kunye nomzi mveliso.
La macala mabini kufuneka enze nzulu intsebenziswano ekulweni "imikhosi emithathu" yobunqolobi, ukwahlukana kunye nobundlobongela kunye nolwaphulo-mthetho oluhlelelekileyo, kunye nolawulo lwee-narcotic kunye nokhuseleko lwe-cyber, ukukhusela ukhuseleko lwamazwe omabini kunye noxolo lwengingqi kunye nozinzo.
URahmon wamkela ngokufudumeleyo uXi ngokundwendwela iTajikistan kwakhona, wabulela iChina ngegalelo layo kwimpumelelo yentlanganiso yesihlanu yeCICA. Uye wongeza ukuvuyisana nesikhumbuzo seminyaka engama-70 sokusekwa kweRiphabhlikhi yase-China, kwaye wanqwenela i-China ngoxolo nozinzo ngonaphakade.
Eqaphela ukuba icala laseTajik ngokubhekisele ekwenzeni nzulu ubambiswano olunobuchule neChina enye yezinto eziphambili kwezopolitiko, uRahmon ubulele icala laseTshayina ngenkxaso yexesha elide noncedo lwayo.
Ucacise ukuzimisela ukuphucula intsebenziswano phakathi kwamazwe amabini kwiiprojekthi ezinje kumandla, i-petrochemicals, amandla e-hydro kunye nolwakhiwo lwezixhobo kwisakhelo seBelt kunye neNdlela, ukunceda iTajikistan izifezekise iinjongo zayo zokwenza umzi mveliso. Ukwabize la macala mabini ukuba anyuse izinga lokutshintshiselana ngabantu kwiindawo ezinje ngolutsha, imfundo kunye nenkcubeko.
I-Tajikistan izinikele ekusebenzisaneni ne China ekulweni "imikhosi emithathu" yobunqolobi, ukwahlukana kunye nokuzibandakanya, kunye nolwaphulo-mthetho olwenziwa kwilizwe liphela, ukomeleza ukuthotyelwa komthetho kunye nokusebenzisana kwezokhuseleko, kunye nokonyusa ulungelelwaniso kwimicimbi yamazwe amaninzi kwi-Shanghai Cooperation Organisation (i-SCO), i-CICA kunye ezinye izikhokelo, ngokweRahmon.
Emva kweengxoxo zabo, iintloko ezimbini zikarhulumente bezimase umsitho wokutyhila imodeli yolwakhiwo lwesakhiwo sepalamente esincediswa yi China kunye nesakhiwo sikarhulumente. Bakwazisiwe nangesicwangciso sokuyila kunye neenkcukacha zentsebenziswano ngeeprojekthi.
U-Xi no-Rahmon batyikitye ingxelo edibeneyo yokuqhubela phambili nzulu kwe China-Tajikistan ngobambiswano olucwangcisiweyo, kwaye babone ukutshintshiselana ngamaxwebhu amaninzi entsebenziswano.
Ngokwengxelo edibeneyo, i-China kunye ne-Tajikistan bazakuqhubeka nokuxhasana kwimiba ephathelene neminqweno yabo engundoqo, enje ngolawulo lwesizwe, ukhuseleko kunye nokuthembeka komhlaba, kwaye babeke phambili kuphuhliso lobudlelwane bamazwe amabini kwimigaqo-nkqubo yamazwe angaphandle.
La macala mabini athembisile kwingxelo yokuqhubela phambili ulungelelwaniso olunzulu phakathi kwe-Belt kunye neNdlela yokuQala kunye ne-Tajikistan yesicwangciso-qhinga sesizwe sokuphuhlisa ukuya kuthi ga kwi-2030 ngenjongo yokwakha uluntu lwase China-Tajikistan lophuhliso.
Isiteyitimenti sithi iTshayina neTajikistan ziya kukhulisa intsebenziswano kwezokhuseleko ekwakheni uluntu lwase China-Tajikistan ngokhuseleko ngenyathelo ngenyathelo.
La macala mabini athembise ukuba aza kuqhubeka ekhulisa intsebenziswano kwinkcubeko, kwezemfundo, kwezenzululwazi, kwezempilo, kwezemidlalo nakwezinye iindawo kunye nokwandisa utshintsho phakathi kweendaba, amaqela obugcisa kunye nemibutho yolutsha.
Baza kuqhubeka ukomeleza ukuxhasana kunye nentsebenziswano kwiZizwe eziManyeneyo, i-SCO, i-CICA kunye nezinye izikhokelo zamazwe amaninzi, kunye nokutshintshiselana ngezimvo nokulungelelanisa imeko ngexesha elifanelekileyo kwimicimbi ephambili yamazwe kunye neyengingqi ukujongana ngokudibeneyo nemiceli mngeni yehlabathi, ngokwe ingxelo.
Ezi nkokeli zimbini zadibana kunye noonondaba kunye. Phambi kweentetho zabo, uRahmon wabamba umsitho omkhulu wokwamkela uXi.
UXi ufike apha ngolwesiHlanu kwindibano yesihlanu ye-CICA kunye notyelelo lukarhulumente eTajikistan, ongumlenze wesibini wohambo luka-Xi lwamazwe amabini aku-Asia. Ngaphambili wayetyelele iKyrgyzstan ngotyelelo lukarhulumente kunye nengqungquthela ye-19 ye-SCO.